Okwamanje, kokuhlaziywa kwamathenda nesikhathi umkhiqizo Kwenziwa hhayi kuphela ngesisekelo umthetho isiRashiya, kodwa futhi ngokuhambisana nomthetho we Customs Union, eyabonakala Okthoba 6, 2007. Amazwe iqhaza kuwo iRussia, Belarus naseKazakhstan.
Ukuze imikhiqizo ethile manje kunesidingo ukuthola izimvume zokuba ezihlukahlukene izinhlelo. Certification we Customs Union eqala wamaphepha esinjalo, ukuhambisana ekukhiqizeni izitifiketi olulodwa noma nezimemezelo ngesikhathi soguquko amazinga sanitary.
Konke lokhu kungenxa okuseduzane futhi uthole ukuthi yini okufanele ibe ithuluzi elifanele.
ukwethulwa izinqubo ezingeni we Customs Union e ukubuya yangaphakathi kazwelonke eyenziwe ngezigaba. Okokuqala kwaba isinqumo we-CCC saziso ngaphansi inombolo 299, lapho imikhiqizo ziye efakwe, okuyinto kumele babhekane FDA. Inqubo ebizwa ngokuthi "isitifiketi yenhlanzeko we Customs Union."
Labo ogunyaziwe ukwenza ke, ingenzele isitifiketi, kanye iseluleko isazi. Lezi zincwadi zibizwa ekhishwe ukuze athathe indawo yalawo ukuthi ubukade kohlaka uthi kazwelonke. Lezi izibambiso eRussia kungase kukwenze uhlekwe Rospotrebnadzor ngesisekelo ukuhlolwa okuyinto Kwakuseshwa laboratories ekhethekile. Lo mbhalo sisebenza hhayi kuphela e-Russia, kodwa futhi Belarus naseKazakhstan. Ngokungafani ngaphambilini esikhishwe iziphetho sanitary-epidemiological, esibekela ethize usuku lokuphelelwa isikhathi, lawa madokhumende ka esinganqunyelwe.
Certification ekuklanyweni idokhumenti elilodwa ukuhambisana
Le nqubo yenziwa ngesisekelo ngezinqumo CCC ngaphansi inombolo 620. Kuyinto uhlu imikhiqizo okuyiwona udinga isitifiketi saziso kanye nokubhaliswa Customs Union ekupheleni izimvume zalo.
Inqubo Kuphoqelekile hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa izimpahla isiRashiya, isi-Belarusian futhi Kazakh, kodwa futhi eminye imikhiqizo amazwe. Isitifiketi olulodwa ingakhishwa kukhona izinkampani umhlali CU ilungu-uthi, kanye abakhiqizi abavela kwamanye amazwe. Ngesikhathi esifanayo, uma egcwele isimemezelo olulodwa ngumfakisicelo kulesi simo kungaba nomkhiqizi yasekhaya. Uma sikhuluma izimpahla amazwe, ukuthola imibhalo isicelo zikhishwa futhi abameleli inkampani, kukhona bentela endaweni Customs Union (ie Russia, Belarus, Kazakhstan).
Ubude besikhathi futhi ukungena force imithetho
Kuyaqondakala ukuthi lapho izitifiketi Customs Union, idokhumenti kubhekwe ukuba evumelekile ensimini ka wonke amazwe angama- lungu. Futhi endabeni isampuli umbhalo wesenzo spectrum kazwelonke ayisesemikhulu kuya emingceleni esimweni esithile.
Ngaphezu kwalokho, isitifiketi ngaphakathi ohlelweni GOST has a eside esiphezulu iminyaka engu-3. Nakuba TC libhekene isikhathi eside, okungukuthi iminyaka 5.
Phakathi nenkathi zesikhashana phambi ethile TR CU engena amandla, umfakisicelo kuvunyelwe ukukhetha yesistimu yokusebenza ukuthi acabanga ukuthi kuwusizo kakhudlwana. isinqumo TCC ngezinye Cha 563 evunyiwe amafomu esihlanganisiwe kwemibhalo ngoba kuhambisana Customs Union.
Certification Centre we Customs Union
emizimbeni Special oqhuba inqubo isitifiketi, iyonikezwa igunya uhlelo kazwelonke. ERussia, inhlangano kufanele athole isitifiketi ezifanele, elibonisa indawo imisebenzi yayo kanye nemikhiqizo. It ikhishwa Rosstandart kokuba central ohlelweni lomphakathi GOST R.
Kuyefana nasendleleni umsebenzi wocwaningo ekhethekile lapho ukuhlolwa ziqhutshwa ngqo futhi amasampula ucwaningo futhi umkhiqizo.
Ngaphezu kwalokho, isitifiketi imizimba kanye Customs Union, futhi laboratories ezikhethekile kumele afakwe irejista lefanele. Kulokhu, ababekade yibo kuphela abangakwazi aveze isitifiketi noma isimemezelo izicelo.
Lowo Mbhalo wangonyaka we kuyisenzo zomthetho, lapho izidingo simiselwe yokubopha izinto ezithile. Lezi zihlanganisa amasevisi, imisebenzi, ukuphathwa, izakhiwo nokunye. Aqondisa khona umthetho kahulumeni "Ngo isiqondiso lobuchwepheshe". Ngokusho kwale dokhumenti, zonke ezinye izenzo kukhona manje ngokuzithandela. Uba iziqondiso saziso kuphela CU lobuchwepheshe, izitifiketi owenziwa maqondana nezimpahla endaweni yokuqala ukuze kuzuzwe zokuphepha (okungukuthi nokuphila nempilo yomuntu, ukuvikeleka kwebhoduluko, izilwane kanye nezitshalo, kwegezi nokuvimbela ukukhwabanisa phezu ingxenye umenzi).
Certification ekwenzeni imithetho lobuchwepheshe
Lapho engena amandla weMithethonqubo Technical ukunikeza isikhathi ushintsho ngesikhathi lapho imithetho kazwelonke kancane yadedela i-TP we Customs Union.
Ngo-2011, yasungulwa, futhi ngo-2012 wathola imibhalo ezingaphezu kuka-50. Inani lokuqala langena labo ngokuqondene nemibuzo perfume kanye yezimonyo imikhiqizo, yezimboni, amathoyizi, izembatho zokuzivikela, izimpahla izingane nentsha.
Ngemva TR Ungena force, izidingo kazwelonke ngenxa kokuthola imibhalo awasasebenzi. Kunalokho, manje usebenza isitifiketi saziso we Customs Union. Nokho, imibhalo eziye ekhishwe ngaphambilini futhi lapho elithi yisikhathi, ukuba iqhubeke ibonisa kusebenza kuze kube usuku esibekiwe kuzo.
isitifiketi esisodwa ikhishwa ku ifomu degrees ezine Ukuvikelwa okungenani. Uhlangothi flip ligcwele ulimi amazwe-kubahlanganyeli Customs Union, lapho idokhumenti ikhiqizwa. Ngaphambili ohlangothini kufanele igcwaliswe kuphela ngesiRashiya. Isitifiketi ongayedwa inikezwa inamba engafani eyaziswa, ngokuhambisana nemithetho nokuqoshwa. Kuye kuba isiqiniseko ukuze ungeze ikhodi yezwe, lapho ikhipha idokhumenti.
Uma isitifiketi kuyadingeka ukuze zibonise ulwazi oluningi (isibonelo, kukhona uhla lwezindawo amakhodi ezidingekayo noma incazelo), ukwenza idokhumenti isicelo, okuyinto iyingxenye ebalulekile kuso.
Declaration, ngokungafani sangaphambilini, akanayo ifomu. Nokho, kukhona isixazululo CTS kule nombolo 563, lapho konke ukwaziswa okukhona, okuyinto kumele iboniswe kuwo. Lo mbhalo ungase futhi wengeze isicelo. Futhi ukubhaliswa kwakhe esiqhutshwa irejista isimo imoto.
Ngaphezu imibhalo, kukhona isitifiketi uphawu olukhethekile-Customs Union. It ihlangana zonke izidingo TR CU. Uma ekhishwe imiculu, umenzi unelungelo kwilebula imikhiqizo yabo, usebenzisa uphawu olusemthethweni.
Lowo Mbhalo wangonyaka we iqukethe izigaba eziyishumi nanhlanu. Ake sifunde bona.
Okokuqala kukhona inombolo yokubhalisa, okuyinto ifakiwe isifinyezo yezwe lapho ikhishwa.
Futhi Ulungise CE marking uhlelo.
isitifiketi ngalinye linenani eliyingqayizivele.
Ingene ulwazi mayelana umzimba isitifiketi, okuyinto ogunyazwe ukukhipha, yabona ukuthi kulungile.
Futhi ibika ulwazi mayelana kubakhi noma kumdayisi imikhiqizo - labo ngaphambilini idokhumenti.
Imininingwane Umkhiqizi luzakwenziwa kunoma isiphi isimo.
imininingwane Okuningi kubika idatha mayelana nomkhiqizo: uhlobo, imodeli, wenze, enza elikushoyo nokunye.
Imibhalo kumele inikwe amandla ukwenza umsebenzi mayelana zazo inqubo isitifiketi ISO, amarekhodi ukuhlolwa, umlilo isitifiketi sokuphepha kanye nabanye. Ngaphezu ohlwini kumele sihambisane enye ikhophi izenzo efanele.
Ngaphezu kwalokho, isitifiketi kuhlanganisa: impilo eshalofini imikhiqizo, izenzo idokhumenti, kosuku lokubhalisa, isitembu, igama abaholi kanye nochwepheshe lizoqeda amasignisha yabo.
Ngakho, kusukela ngo-2007, okusho ngosuku lapho kukhona inyunyana amasiko, isitifiketi umkhiqizo seluqaliwe ngendlela ethé ukuhluka kancane kunangaphambilini. Nokho, iziqondiso lobuchwepheshe sesingasebenza kancane kancane. Ngakho-ke, bonke abathintekayo ibe nomthamo esanele nezimo ezintsha.